“Ahịa mbụ” Ga-abụ Mantra | Martech Zone
Ijikwa ike nke ọtụtụ ọgbara ọhụrụ na teknụzụ ahịa dịnụ bụ ezigbo ụzọ maka azụmaahịa, mana ọ bụrụ naanị na iburu onye ahịa gị n'uche. Ọganihu azụmaahịa na-adabere na teknụzụ, nke a bụ eziokwu a na-enweghị mgbagha, mana ihe dị mkpa karịa ngwa ọ bụla ma ọ bụ ngwanrọ ọ bụla bụ ndị ị na-eresị ha.
Mara onye ahịa gị mgbe ha abụghị onye ihu na ihu na-eweta nsogbu ugbu a, mana oke data nke igwu egwu site na ndị na-ere ahịa nwere ike ịnweta foto sara mbara karịa ka ọ dịbu. Ckingchọpụta usoro ziri ezi na ịme ihe nyocha mmekọrịta ọha na eze na-eme ịmata ezigbo ndị ahịa mfe karịa na mbụ ma na-enyere aka mee ka nghọta gị zuru ezu banyere ndị ahịa gị.
Olee otú ndị ahịa na-atụ anya na ọrụ si gbanwee
Ndị ahịa abụrụla ndị maara nke ọma otu ha nwere ike isi nweta ụdị ahịa, ọkachasị uto nke mgbasa ozi mmekọrịta. Na nke ọzọ, nke a pụtara na atụmanya ha abụrụla nke siri ike karịa. Enweghi ike ichota ochicho a site na ahia dika o bu ohere ozo inye ndi oru ahia na ihe omuma ha, ma gosiputa ogo nke ulo oru ha.
Izu ahịa ndị ahịa abụrụla ụkpụrụ, yana otu nnyocha e mere na-atụ aro na 32% nke ndị ahịa na-atụ anya nzaghachi site na ika n'ime 30 nkeji, yana 10% ọzọ na-atụ anya ihe laghachi n'ime 60 nkeji, ma n'oge "oge ọrụ" ma ọ bụ n'abalị ma ọ bụ ngwụsị izu.
Ọnụọgụ nke ọmarịcha ngwaọrụ martech dị na ịnakọta ma nyochaa data enyerela aka nke ukwuu, yana nchịkọta weebụ jikọtara ya na nsonye mmekọrịta mmadụ na ibe ya, CRM ọdụ data, yana ọnụ ọgụgụ metụtara nbudata ma ọ bụ nọmba ntinye aka. Olu dị iche iche nke ụdị data dị iche iche na-enye ohere maka izi ezi na ịchọpụta ndị ahịa lekwasịrị anya na ịkpụzi mkpọsa gị.
Nke a bụ ọtụtụ ihe iji jikwaa ma debe ya, ọ bụ ihe kwere nghọta na akara nwere ike ịgbalị idobe ihe niile n'usoro. Nke a bụ ihe kpatara itinye ego na teknụzụ ziri ezi ji dị mkpa na ihe kpatara iji jiri ọgụgụ isi na ngwanrọ na-eweta mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Iji nyere aka kwado njikwa data gị maka abamuru nke ndị ahịa gị, ihe ndị a kwesịrị ịbụ isi.
Knowingmara ihe ndị asọmpi gị na-eme bụ ihe dị mkpa n'ịchọta ikike na mmejọ n'ime ụlọ ọrụ gị. Nwere ike iwepụ ndị asọmpi gị site na ịgbaso mmeri na ọdịda ha nke ọma na ịpịpụta ihe masịrị na ihe ndị na-adịghị amasị nke ndị otu na-ege ntị.
Onye na-asọ mpi na benchmarking na-enye gị ohere ịchọta ọnọdụ gị n'ime ụlọ ọrụ gị ma rụọ ọrụ iji melite ya ebe ọ dị mkpa. Can nwere ike inyocha otu ụdị metrik ahụ na mmekọrịta mmadụ na ibe gị ka ị na-eme nke gị, na-eme ka usoro ihe efu dị iche iche karịa data ị nwere ike ịchịkọta.
Ebumnuche nke ndị na-ege ntị
Site na ọtụtụ ozi gbasara ndị na-ege anyị ntị dị, enweghị mgbaghara ịghara ịhazi ọdịnaya ma nyefee ahụmịhe ndị ahịa pụrụ iche. N'ihe atụ a nke uwe na ngwa ngwa ngwa ngwa n'ụlọ na-esote ọ ga-ekwe omume ịhụ otu esi understandingghọta ọdịmma ndị ahịa ha nwere ike inyere ha aka ịhazi mkpọsa n'ọdịnihu.
Ihe data a nwere ike iyi ihe enweghi usoro mana o bu ihe obula. Na-eleba anya na data Sotrender, ọ na-egosi Na-esote ebe ha ga-ewe mkpọsa ha n'ọdịnihu yana isiokwu nwere ike itinye ndị na-ege ha ntị nke ọma. Inwe ozi a dị oke mkpa maka ịhazi mkpọsa n'ọdịnihu ma nyere aka hụ na ha nọ n'ọnọdụ kachasị mma maka ọkwa aka dị elu.
Kedu ihe ndị ahịa gị chọrọ? Nwere ike ịmara ihe ịchọrọ ịzụlite mana ọ bụ ihe ndị mmadụ chọrọ? Ọbụna nzaghachi a na-achọghị site na mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi na mmepe ngwaahịa ma ị nwere ike ịhọrọ ịga n'ihu ma tinye ndị ahịa gị na mmepe ngwaahịa gị.
Coca Cola mere nke a na ha VitaminWater ika dị ka ha soro ha rụọ ọrụ Facebook ịchọta onye ga - enyere aka mepụta ekpomeekpo ọhụrụ. E nyere onye mmeri ahụ $ 5,000 ka ya na ndị otu mmepe ga - arụ ọrụ na - emepụta ụtọ ọhụrụ ahụ, ọ butere nnukwu njikọ aka na ihe karịrị nde 2 nke ndị na - agụ VitaminWater Facebook na - etinye aka na usoro mmepe ngwaahịa.
Nchọpụta na Mmetụta Mgbanwe
N'ime mpaghara ọ bụla, enwere ndị isi na - eme ihe ike na - elebara anya na nlebara anya n'ime obodo ịntanetị. Dị na-alụ ọgụ iji jikọọ ya na ndị na-eme ihe ike a, na-etinye oge dị ukwuu na ego itinye ego iji kwenye ndị na-eme ihe iji kwalite ma kwado ngwaahịa ha.
Site na nnukwu na ndị na-eme ihe ike na-achọkarị, azụmahịa gị kwesịrị ịchọta ndị nwere ike ịkwado azụmahịa gị ma ha na ndị ahịa gị ịchọrọ. Site na 'mantra' mbụ ndị ahịa ị kwesịrị ịchọ ndị na - eme ihe pụtara ndị na - ege gị ntị ihe nwere ike ịba uru maka mbọ ị na - agba ọsịsọ, ọ bụghị naanị "onye ọbụla" nwere aha na ezigbo ndị na - eso ụzọ. Chọpụta ndị na-eme ihe ziri ezi maka ika gị dị ezigbo mkpa maka ọganiihu na nka nke aghụghọ ahịa ahịa.
Wantchọrọ itinye akara gị dịka nke ndị ahịa na-anya isi ịkwado, mana iji nweta nkwado ị ga-abụrịrị onye ahịa zuru ezu. Ọ dị mfe ịbanye na teknụzụ ma chefuo akụkụ mmadụ nke mbọ ị na-agba. Tekinoloji dị ebe ahụ iji nyere aka ma nyere aka n'iwepụta ahụmịhe ndị ahịa kachasị mma.
Tags: nyochanyocha onye asọmpiahịa mbụFacebooklekwasịrị ndị na-ege ntị anya
3 ayszọ Ahịa Mkparịta ụka agbanweela afọ